Toward kune ramangwana risina zvombo zvenyukireya - The World Kurume
musha » Noticias » Press Notes » Toward kune ramangwana risina zvombo zvenyukireya
Iyo Prohibition yezvombo zvenyukireya inovhura ramangwana idzva revanhu
-50 nyika (11% yevagari vepasi) vakazivisa zvombo zvenyukireya zvisiri pamutemo.
-Zvombo zvenyukireya zvicharambidzwa kungofanana nemakemikari uye zvombo zvehupenyu.
-United Nations ichaita Chibvumirano cheProhibition yeNuclear Weapons muna Ndira 2021.
Musi waGumiguru 24, nekuda kwekubatanidzwa kweHonduras, huwandu hwenyika makumi mashanu dzakabvumidza Chibvumirano cheProhibition yeNuclear Weapons (TPAN) chakasimudzirwa neUnited Nations chakazadziswa. Mune mimwe mwedzi mitatu, TPAN ichatanga kushanda pasirese pachiitiko kumuzinda weUnited Nations muNew York.
Mushure mechiitiko ichocho, TPAN ichaenderera munzira yekurambidzwa zvachose pazvombo zvenyukireya. Idzi nyika makumi mashanu dzicharamba dzakabatana ne makumi mana neshanu dzakatosaina iyo TPAN uye vakamirira kusimbiswa uye vamwe makumi matatu nevasere vakashanda uye vakatsigira kugadzirwa kwayo kuUN. Makakatanwa anogona kumuka mune dzese nyika nekuda kwekumanikidzwa nemasimba enyukireya kunyararidza kuda kwevagari, asi, mune zvese zviitiko, vanenge vari vagari vanozofanira kukwidza manzwi edu uye kumanikidza hurumende dzedu kuti dziite. Joinha kuchema-chema kurwisa zvombo zvenyukireya. Tinofanirwa kuita ruzha urwu rurambe ruchikura kudzamara masimba enyukireya ave kuwedzera kusarudzika, nepo ivo vagari vavo vachiti vanobatana nesimba rekuchengetedza runyararo uye kwete kukurudzira njodzi.
Nhanho hombe inovhura mikana isingafungidzirwe kusvika nguva pfupi yadarika
Kupinda musimba kweTPAN idanho hombe rinovhura mikana kusvika munguva pfupi yapfuura isingafungidzike. Isu tinozviona sechidhinha chekutanga kubviswa pamadziro chinofanirwa kuputswa, uye kubudirira ndicho chiratidzo chekuti kufambira mberi kunogona kuenderera mberi. Tiri kutarisana pamwe nenyaya dzakakosha kwazvo dzemakumi emakore apfuura padanho repasi rose. Kunyangwe pasina kana chidimbu chimwe chenhau munhau yepamutemo (propaganda), isu tinofungidzira kuti izvi zvine simba zvichawedzera, uye nekukurumidza kana zviito zvakavanzika uye / kana zvakatsauswa nemasimba ane simba zvinogona kuoneka.
Mutambi mukuru wekubudirira uku anga ari Mushandirapamwe Wepasi Pose Kupedza Nuclear Weapons (ICAN), anokunda Nobel Peace Prize mu2017, iyo yakaratidza pane yayo twitter account kukosha kwechiitiko ichi, icho chinotanga kushanda kubvira Ndira 22, 2021.
Mune ichangopfuura World March isu takaona kuti kunyangwe munyika dzine hurumende dzinotsigira TPAN, ruzhinji rwevagari havazivi nezveichi chokwadi. Zvichipa mamiriro epasirese emakakatanwa uye kusava nechokwadi nezveramangwana, pakati pehosha inotibata, kune kuzadza kwezviratidzo zvisina kunaka uye "nhau dzakaipa". Naizvozvo, kuitira kuti titsigire zvinobudirira, tinokurudzira kuti tisapesvedzera kutya kwenjodzi yenyukireya semubatsiri, asi, nekusiyana, kusimbisa zvikonzero zvekupemberera kurambidzwa.
Mubatanidzwa Wenyika isina Hondo neChisimba (MSGySV), nhengo yeICAN, iri kushanda kuita mhemberero huru muna Ndira 23 yekurangarira chiitiko chakakosha ichi. Ichave iine chaiwo mafomati eiyo cyber-pati. Icho chirevo chakavhurika uye mapoka ese anofarira, vatambi vetsika uye vagari vanokokwa kuti vajoinhe. Kuchave nekushanya chaiko kwenhoroondo yese yekurwisa zvombo zvenyukireya: kukurudzira, makonati, kufora, maforamu, kuratidzira, kuzivisa, zviitiko zvedzidzo, masosiosheni, nezvimwe. Kune izvi zvichawedzerwa marudzi ese emimhanzi, tsika, hunyanzvi uye kutora chikamu kwevagari kwezuva rePuraneti.
Isu tichakudziridza chiito ichi mune yedu inotevera kutaurirana uye zvinyorwa.
Nhasi tinobatana nezvakataurwa naCarlos Umaña, ICAN director wepasi rose, akataura achifara kuti: "Nhasi izuva renhoroondo, iro rinoratidza chiitiko chakakosha mumutemo wepasi rese mukuda zvombo zvenyukireya ... Mumwedzi mitatu, apo TPAN icha mukuru, kurambidzwa kuchave mutemo wepasi rose. Saka panotanga nguva nyowani… Nhasi izuva retariro ”.
Isu tinotorawo uno mukana wekutenda nekukorokotedza nyika dzakabvumidza TPAN nemasangano ese, mapoka nevamiriri vakashanda uye vachiramba vachidaro kuitira kuti Hunhu nepasi vatange kufamba nenzira inotungamira mukubviswa kwezvombo zvenyukireya. Icho chinhu icho isu tiri kuzadzikisa pamwechete. Tinoda kutaura nezveRunyararo Chikepe icho, kubva kuJapan, panguva yezuva rekupemberera, chakarangarira nekuziva iro basa rakaitwa neMSGySV kumushandirapamwe weICAN paTPAN parwendo rwese rweWW2.
Isu tinoramba tichishanda nemunhu wese nerunyararo uye kusagadzikana. Pakati pezviito zvitsva zvakarongwa, MSGySV ichabata webinar yakanangana nevadzidzi uye fakaroti kubva kumayunivhesiti akasiyana siyana mukati mehurongwa hweakateedzana ayo Permanent Secretariat yeSummit yeNobel Peace Laureates akaronga mumwedzi inotevera. Dingindira richava: "Zviito munzvimbo yemagariro uye kuwedzera kwavo kwepasi rose"
Nechishuwo chezvi uye zvimwe zviito zvakawanda zvichauya, tinosimbisa chiziviso chatakaita musi waGumiguru 2 chekubata 3rd World Kurunyararo neRunyararo muna 2024.
Chinyorwa chenyika dzakabvumidza TPAN
Antigua neBarbuda, Austria, Bangladesh, Belize, Bolivia, Botswana, Cook Islands, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Fiji, Gambia, Guyana, Honduras, Ireland, Jamaica, Kazakhstan, Kiribati, Laos, Lesotho, Malaysia. , Maldives, Malta, Mexico, Namibia, Nauru, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Niue, Palau, Palestine, Panama, Paraguay, Saint Kitts neNevis, Saint Lucia, Saint Vincent neGrenadines, Samoa, San Marino, South Africa, Thailand , Trinidad neTobago, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Vatican, Venezuela, Vietnam.
Chinyorwa chepakutanga chinogona kuwanikwa pane Pressenza International Press Agency webhusaiti: Iyo Prohibition yezvombo zvenyukireya inovhura ramangwana idzva revanhu.